Ukutshona kwelanga iParadesi - I-Airbnb
Ukutshona kwelanga iParadesi
Ikwindawo esembindini, ethe cwaka nekhuselekileyo, le ndawo yabucala nentle, ikumgama wemizuzu eyi-5:
izikhululo zegesi, amaziko okuthenga, iivenkile ezinkulu kunye neevenkile zokutyela.
Iindawo ezintle nezicocekileyo:
Amagumbi okulala ayi-3, abantu abayi-7, kukho negumbi lokuhlala elinesofa eyibhedi.
Igumbi lokulala eliyi-1 lomntu omnye, ngenkonzo yokuhlamba impahla, akukho ndawo yokubeka impahla ngaphakathi.
Amagumbi okuhlambela ayi-4.5, amagumbi okuhlala ayi-3, amatye ayi-4, elinye lawo lijonge phezulu kwindawo entle yesixeko, igumbi lokuhlamba iimpahla, ikhitshi, igumbi lokutyela kunye nesikhululo sekofu.
Indlu inamagumbi aliqela, icocekile kwaye inazo zonke izinto ozidingayo. Ukuba ipati yakho inabantu abayi-8 nangaphezulu ngoko le yindlu efanelekileyo onokubhukisha kuyo, nokuba uza kuba nepati yabantu abayi-5 okanye abayi-7 uza kuziva usekhaya. Le ndlu, inekhitshi elipheleleyo, nazo zonke izixhobo zombane onokuzidinga (Ifriji, i-deep freezer, isitovu sombane, i-microwave, i-toaster, i-blender, njl njl.) Umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla. A/C kumagumbi okulala ayi-3 kumgangatho wesibini. Isixhobo esilula sefeni Kwigumbi lokulala lesine. Kukho i-TV yesikrini ethe tyaba enenkonzo yeentambo ekwigumbi lokuhlala ezantsi. Indlu ibalwa NGEWIFI.
Le ndlu ikwindawo yabucala, enepaki encinci yabantwana phakathi. Ungagijima kusasa okanye ebusuku. Kukho isango lokhuseleko ngoko kuza kufuneka ube nemvume yemoto ukuze ukwazi ukungena kuyo, ibe uza kuyifumana xa ufika.
Ndihlala ngaphandle kwedolophu, kwaye ndihamba amaxesha amaninzi ngoko amaxesha amaninzi andiyi kufumaneka, kodwa kuya kusoloko kukho umntu ohoya yonke into osenokuyidinga.